Abaalmarinta Abaalmarinta | Jacaylka, Galmada iyo Internetka Goynta porno
Dhammaan Blogyada ka socda Aasaaska Abaalmarinta
Maya. 16 XNISH XUM
No. 15 Maalinta Jacaylka 2022
Maya. 14 Dayrta 2021
Daabacaad Gaar ah May 2021
TRF ee Saxaafadda 2022
TRF gudaha Podcasts
Caawimo ku saabsan isticmaalka balwadda ee internetka/isticmaalka dhibka leh
Muuqalka Xaqiijinta da'da
Shirka Xaqiijinta Da'da 2020 Agab
Warka xaqiijinta da'da
24th Juun 2022
Waalidiintu waxay ka hadlaan Sawirada Galmada ee Internetka.
6th Juun 2022
12 Talo oo loogu talagalay waalidiinta inay kala hadlaan carruurta wax ku saabsan lulataaye
Billie Eilish waxay siisaa warshadaha lulataaye indho madow
16th Diisembar 2021
Simon Bailey: lulataaye waxay kicisaa rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha
15th Diisembar 2021
Kufsiga iyo lulataaye
Riix halkan si aad u hesho warar dheeraad ah
"Dhammaan waxqabadyada internetka, porno ayaa leh awoodda ugu badan ee lagu noqon karo balwad," Dhakhaatiirta neerfaha ee reer Holland ayaa leh Meerkerk iyo al. 2006
Abaalmarinta Abaalmarinta waa xiriir horudhac ah iyo sadaqo waxbarasho xagga galmada ah. Magaca ayaa ka yimid xaqiiqda ah in nidaamka abaalmarinta maskaxda uu mas'uul ka yahay waditaankeena ku wajahan jacaylka iyo jinsiga iyo sidoo kale abaalmarinta kale ee dabiiciga ah sida cuntada, ugubnimada iyo hanashada. Nidaamka abaalmarinta waxaa lagu afduubi karaa abaalmarino xoog leh oo macmal ah sida daroogada, aalkolada, nikotiinka iyo internetka.
Abaalmarinta Abaalmarinta waa isha ugu muhiimsan ee macluumaadka caddaynta ku saleysan xiriirka jacaylka iyo saameynta sawir-gacmeedka internetka ee caafimaadka maskaxda iyo jirka, xiriirka, hanashada iyo mas'uuliyadda sharciga.
Kuliyada Boqortooyada ee Dhaqaatiirta Guud waxay aqoonsadeen aqoon isweydaarsigeena tababarka daryeelka caafimaadka iyo xirfadlayaasha kale ee ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka maskax ahaan iyo caafimaadka jirka, oo ay ku jiraan cilladaha galmada. Iyada oo taa la taageerayo, waxaan samaynaa baaritaan ku saabsan jacaylka, galmada iyo filimada qaawan ee internet -ka oo ay heli karaan dadweyne aad u ballaaran. Eeg lacag la'aanteena qorshooyinka casharka dugsiyada hadda laga heli karo websaytkan iyo kan Websaytka Kabitaanka Waxbarashada ee Times, sidoo kale waa bilaash. Sidoo kale eeg annaga Hagaha waalidka ee sawir-qaadka internetka. Waa wax aan macquul aheyn in laga hadlo jacaylka iyo xiriirka galmada maanta iyada oo aan la aqoonsan doorka sawir-gacmeedka internetka. Waxay saameyn ku yeelataa waxyaabaha laga filayo iyo dhaqanka, gaar ahaan dhalinyarada.
Research Waxaa soo saaray Golaha Ingiriiska ee Kala-saaridda Filimka ee Boqortooyada Midowday (UK) waxay ku ogaatay in gudaha Boqortooyada Midowday 1.4 milyan oo carruur ah bishii la daawado qaawan. Afar iyo toban sano ama kayar ayaa da'doodu ahayd 60 boqolkiiba carruurta markii ugu horreeysay lagu arkay internetka. Intooda badan, 62 boqolkiiba, ayaa sheegay inay si kadis ah ugu turunturoodeen isla markaana aysan fileynin inay arkaan filimmo qaawan. Inta badan waalidiinta, boqolkiiba 83, waxay jecel yihiin inay arkaan xaqiijinta da'da oo lagu soo kordhiyay goobahan waxyeellada leh. Iyo 56 boqolkiiba carruurta 11 illaa 13 jirka ayaa jeclaan lahaa in laga ilaaliyo waxyaabaha 'ka badan 18-jirka' khadka tooska ah.
Waxaan kugula talineynaa daqiiqaddan 2 animation sida hordhaca. Faahfaahin wanaagsan oo ku saabsan saameynta porno ee maskaxda, daawo tan Xilliga daqiiqadda ee 5 laga soo qaatay TV-ga documentary-ga ah. Waxay leedahay qalliinka neerfaha, cilmi-baaris ka socota Jaamacadda Cambridge iyo waayo-aragnimada nololeed ee qaar ka mid ah dhalinyarada isticmaala.
Waa kuwan qaar fudud is-qiimaynta leylisyada ay ku qaabileyaan dhakhaatiirta neerfayaasha iyo kiliinigyadu si ay u ogaadaan haddii buugaasi uu saameynayo adiga ama qof kuu dhow.
Filimmada qaawan ee internetka ma aha sida qaawan ee la soo dhaafay. Waa kicinta 'supernormal'. Waxay saameyn ku yeelan kartaa maskaxda si la mid ah kookaha ama hirowiinka markii ay si joogto ah u shiiqaan. Pornography ayaa si gaar ah ugu habbooneyn carruurta ka kooban 20-30% isticmaalayaasha bogagga dadka waaweyn. Kani kaliga ayaa xaq ka dhigaya sharciga dowlada UK ee xaqiijinta da'da si loo xadido galaangalka caruurta iyo ilaalinta caafimaadkooda.
Caruurta da’doodu yartahay toddobo ayaa loosoo bandhigayaa sawirada qaawan ee dhifka ah sababta oo ah la'aanta baaritaanno da 'daaran oo waxtar leh marka loo eego cilmi oo ay wakiisheen Guddiga Kala-saaridda Filimka Ingiriiska. Filimaanta ayaa loo sameeyay faa'iido, waa warshado balaayiin dollar ah. Looguma sameyn in lagu baro carruurta wixii ku saabsan galmada iyo xiriirka.
Tijaabada Bulshada ee Aan La Xadidin
Taariikhda waligeed waligeed ma helin waxyaabo aad u fara badan oo galmo kicinaya oo si xor ah loo heli karo sida hadda. Waa tijaabadii ugu ballaadhnayd, ee aan sharciyeysnayn taariikhda aadanaha. Waagii hore filimmada qaawan ee adag ayaa adkeyd in la helo. Waxay badanaa ka timid dukaamada dadka waaweyn ee ruqsada haysta oo mamnuucaya inuu soo galo qof kasta oo ka yar 18 sano. Hubinta da'da waxtarka leh ee booqdayaasha waa la la'yahay. Si xad dhaaf ah ayaa loo soo saaraa a kala duwan of maskax ahaan iyo jirka arrimaha caafimaadka sida welwelka bulshada, niyadjabka, cillad jinsi iyo balwadda oo aad u magacawdo dhawr. Tani waxay ka dhacaysaa dhammaan kooxaha da 'kasta.
Cilmi baaris ayaa muujisay in kufsiga fara-xumeynta internetka ay yareyn karto xiisaha, iyo qanacsanaanta, xiriirka dhabta ah ee galmada. Tirada sii kordheysa ee dhalinyarada ilaa da'da dhexe ma awoodaan inay galmo la sameeyaan lamaanahooda. Dhallinyaradu waxay ku sii kordhayaan dagaal iyo rabshad dabeecaddooda galmada sidoo kale.
Hadafkayagu waa inaan ka caawino dadka waaweyn iyo xirfadleyda helitaanka caddeynta ay u baahan yihiin inay dareemaan kalsooni ku filan inay qaadaan tallaabo ku habboon si looga caawiyo bukaannadooda, macaamiishooda iyo carruurtooda. Si ku meel gaar ah baabi'inta siigaysiga, ama yareynta hal jeer soo noqnoqoshada, waxay ku saabsan tahay ka soo kabashada balwadda iyo dhibaatooyinka galmada ee sababa galmada - wax kale ma jiraan.
'Awoodda Warshadaha' Internet Porno
Ka qulqulka porn-ka waxay saameyn xun ku yeelan kartaa caafimaadka galmada, maskaxda, dhaqanka, xiriirka, xiriirka, helitaanka, wax soo saarka iyo dambi. Illaa iyo inta uu isticmaalehu sii wado inuu wax yeeleeyo, isbeddelada maskaxda ayaa noqda kuwo sii adkaada oo ka adkaada in la beddelo. Isticmaalka marmarka qaarkood uma badna inuu sababay waxyeelo waarta. La'aanta isbeddelada maskaxda ayaa shaqeynaya duubay oo leh wax ka yar 3 saacadood adeegsiga sawirada qaawan toddobaad kasta.
Maskaxdayaga maskaxdu kuma habbooneyn laqabsashada kicinta badan. Caruurtu waxay si gaar ah ugu nugul yihiin bixinta bilaashka ah ee bilaashka ah, ee qulqulka qaawan ee internetka. Tan waxaa u sabab ah saameynta weyn ee ay ku leedahay maskaxdooda xasaasiga ah marxalad muhiim ah ee horumarka nafsaani iyo barashada.
Intooda badan sawirada qaawan ee internet-ka ma ahan kuwo muujinaya isku soo dhawaansho iyo is aaminaad, laakiin waa galmada aan aaminka aheyn, qasabka iyo qalalaasaha, gaar ahaan haweenka iyo qowmiyadaha tirada yar. Caruurtu waxay samaynayaan barnaamij maskaxdooda ah si ay ugu baahan yihiin sheeko xariir joogto ah iyo heerar sare oo shucuureed aan lala jaan qaadi karin lammaaneyaasha nolosha dhabta ah. Waxay kaloo ku tababartaa inay iyaguna noqdaan kuwo wacaal ah.
Isla sidaas oo kale qaar badan ayaa dareemaya inaanay ku filnayn galmada oo ay ku fashilmaan inay bartaan xirfadaha shaqsiyadeed ee ay u baahan yihiin si ay u horumariyaan xiriir caafimaad leh, xiriir dhow leh muddada dheer. Tani waxay horseedaysaa kalinnimo, walwal bulsho iyo niyad jab marka loo eego tirada.
Inta badan dadka dhalinyarada ah markii ugu horeysay ee ay daawadaan filimada qaawan waxay ahaayeen shilal, in ka badan 60% carruurta 11-13 ee arkay sawir-gacmeedka iyagoo sheegaya in daawashada sawir-gacmeedyada ay tahay mid aan ula kac ahayn sida ku cad dhowaan cilmi. Carruurtu waxay ku sifeeyeen inay dareemayaan "xaalad qasab ah" iyo "wareer". Tani waxay si gaar ah u adeegsaneysay markay arkeen sawir-gacmeedyo ka yar da'da 10.
Tani waxay la yaab ku noqon kartaa waalid badan. Hadaad rabto inaad waxbadan bartid, aragkeena Tilmaamaha Waalidka ee Pornography Internet . Ujeeddadeedu waa inay ka caawiso qalabaynta waalidiinta iyo daryeeleyaasha wadahadalladaas adag ee lala yeelanayo carruurtaada iyo isku-dubaridka taageerada dugsiyada haddii loo baahdo. Booliska Kent ka dig in waalidiinta laga dacweyn karo 'galmada' carruurtooda haddii ay mas'uul ka yihiin qandaraaska taleefanka. Eeg boggayaga ku saabsan sexting iyo sharciga gudaha Scotland Iyo galmo gudaha ah England, Wales iyo Waqooyiga Ireland.
Waxaan bilownay taxane ah oo bilaash ah qorshooyinka casharka macallimiinta wax ka qaban doonta "Hordhaca galmada"; "Galmada iyo Maskaxda Dhallin-yarada"; "Galmada, Sharciga iyo Adiga"; "Pornography on Trial"; "Jacaylka, Galmada & Filimada Qaawan"; "Pornography iyo Caafimaadka Maskaxda", iyo "The Great Porn Experiment". Waxay ka kooban yihiin jimicsiyo badan oo kobcin, madadaalo iyo isdhaxgal leh iyo ilo siiya meel aamin ah oo ardayda looga wada hadlo arimahan oo dhan. Ma jiro wax eed ama ceeb ah, kaliya xaqiiqooyinka, sidaa darteed dadku waxay sameyn karaan xulashooyin aqoon leh.
Casharrada hadda la bixiyo waxay ku habboon yihiin sidoo kale iskuulada diinta ku saleysan. Muuqaal qaawan lama muujinayo. Luqad kasta oo ka hor imaaneysa caqiidada diinta waa la beddeli karaa.
Abaalmarinta Abaalmarinta waxay kormeertaa cilmi baarista
Hay'adda Abaal-marinta waxay la socotaa daraasad cusub maalin kasta waxayna ku daraysaa horumarinnada agabkeenna. Waxaan sidoo kale soo saareynaa cilmi baaris gaar ah, gaar ahaan dib u eegista ee cilmi-baaristii ugu dambeysay si dadka kale ula socdaan wixii cusub ee soo kordha.
Hadda waxaa jira todoba daraasadood kuwaas oo muujinaya a isku xirnaanta nacaybka u dhexeeya isticmaalka sigaarka iyo waxyeelada ka soo baxa isticmaalkaasi.
Hay'adda Abaalmarinta Abaal-marinta waxaan ka warbixinnaa sheekooyin laga bilaabo kumanaan kun oo rag iyo dumar ah oo ku soo koray si xun isticmaalka adeegsiga sawirada internetka. Daraasaddan aan rasmiga ahayn waa mid qiimo leh marka la tixgalinayo isbeddelada hadda jira oo qaadan kara waqti dheer inta laga dhex muuqan karo cilmi baarista rasmiga ah. Kuwo badan ayaa tijaabiyay joojinta jinsi waxayna la kulmeen faa'iidooyin kala duwan oo xagga maskaxda iyo jir ahaaneed ah taasna waxay keentay. Eeg nin dhallinyar ahsheekada.
"Maandooriye sigaar ah"
Shirkadaha sawir-gacmeedka sawir-gacmeedka ayaa hormuud ka ahaa horumarka iyo naqshadeynta internetka. Kordhinta joogtada ah ee filimada internetka ayaa maskaxda ku dhalisa inay soo saarto damacyo xoog badan. Damacaasi wuxuu saameyn ku yeeshaa fikirka isticmaaleha qaawan iyo habdhaqanka waqtiga. Tirada isticmaaleyaasha ee sii kordhaya tani waxay u horseedi kartaa xakameynta dabeecadda galmada ee qasabka ah. Cilad-baadhistan oo dhawaan ay soo saartay dib-u-eegistii kow iyo tobnaad ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee Qoondaynta Caalamiga ee Cudurrada (ICD-11) waxaa ka mid ah isticmaalka sigaarka iyo isticmaalka siigaysiga. Ka-hortagga fara-xumeynta iyo siigaysiga ayaa sidoo kale loo kala saari karaa inuu yahay cilad-qabatin la qabatin ah haddii kale aan lagu qeexin isticmaalka ICD-11.
Sida laga soo xigtay baadhitaankii ugu dambeeyay, in ka badan 80% dadka raadinaya caawimaad caafimaad ee ku saabsan warbixinta dabeecadaha galmada ee qasabka ah waxay leeyihiin dhibaato la xiriirta galmada. Daawo tan ugu fiican Hadalka TEDx (9 daqiiqo) laga bilaabo Janaayo 2020 Jaamacadda Cambridge oo tababartay cilmiga neerfaha Casper Schmidt si wax looga barto "Cilladaha Habdhaqanka Isku Galmoodka ee Isku Qasan".
Pornography maanta waa 'xoog warshadeed' marka loo eego tirada la heli karo iyo heerarka kicinta, marka la barbar dhigo filimada xitaa 10 ama 15 sano ka hor. Isticmaalkeedu waa xulasho shaqsiyadeed, umana nihin in laga mamnuuco dadka qaangaarka ah qaawan, laakiin carruurta waa in la ilaaliyaa Siigaysiga xad-dhaafka ah ee ay kiciso sawir-gacmeedka ayaa u horseedi kara arrimaha caafimaadka maskaxda iyo jidhka qaarkood. Waxaan rabnaa inaan ka caawinno dadka isticmaala inay awoodaan inay sameeyaan 'xulasho' ku saleysan caddeynta ugu wanaagsan ee laga helayo cilmi baarista hadda la heli karo iyo xulashooyinka soo kabashada calaamadaha, haddii loo baahdo. Si ku meel gaar ah baabi'inta siigeysiga, ama dhimista soo noqnoqoshada, waa wax walba oo ku saabsan ka soo kabashada balwadda ama qaboojinta galmo ee walxo adag oo adag iyo dhibaatooyinka galmada ee qaawan - wax kale ma jiraan.
Waxaan u ololeyneynaa inaan yareyno sida fudud ee carruurta ay ugu fududaan karaan sawir-gacmeedka qaawan. Tobanaan ka mid ah cilmi waraaqaha ayaa tilmaamaya inay waxyeello u geysaneyso carruurta heerka ay ugu nugul yihiin koritaanka maskaxda. Waxaa si xowli ah kor ugu kacay xadgudubka galmada cunugga ee cunugga 8-dii sano ee la soo dhaafay iyo dhaawacyada galmada la xiriira ee la xiriira galmada sida ay qabaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ee ka soo qaybgalay aqoon isweydaarsiyadayada iyo xitaa xitaa dhimashada. Waxay kuxirantahay rabshadaha guriga ka dhaca, oo ay ugu horeeyaan raggu dumarka.
Waxaan taageersanahay hindisayaasha dawladda UK ee lagu xoojinayo xaqiijinta da'da ee waxtarka leh ee goobaha ganacsiga ee pornada iyo baraha bulshada si aysan carruurtu ugu turunturoon si sahal ah. Ma beddeli doonto baahida waxbarasho ee ku saabsan khatarta. Oo yaa anfacaya haddaynu waxba samayn? Warshadaha lulataaye ee balaayiin dollar ah. Dowladda UK waxay qorsheyneysaa inay wax ka qabato filimada laga helo baraha bulshada iyo bogagga internetka ee qaawan ee ku jira Sharciga Badbaadada Internetka. Uma badna inay sharci noqoto, si kastaba ha ahaatee, ilaa dhamaadka 2023 ama horraanta 2024 sida ugu fiican.
Macluumaadka ku jira mareegahan ayaa dadka ka caawin kara inay horumariyaan fursadaha ay ku raaxaysanayaan guul, xiriir galmo jacayl. Haddii aad jeclaan lahayd in mawduuc kasta oo la xidhiidha lagu daro, fadlan nala soo xiriir adigoo nagala soo xiriiraya info@rewardfoundation.org.
Abaalmarinta Abaal marinta ma bixinayo daaweyn ama bixin talo bixin sharci. Si kastaba ha noqotee, waxaan samaynaa wadiiqooyin calaamadaha lagu raadsado oo laga bogsado dadka adeegsigooda uu dhibaato ku noqday. Hadafkayagu waa inaan ka caawino dadka waaweyn iyo xirfadleyda helitaanka caddeynta iyo taageerada si loogu oggolaado inay qaadaan tallaabo ku habboon.
Porn -ka internetka waa bilaash, laakiin carruurtu waxay bixinayaan qiimaha
© 2021 HESHIISKA HORUMARINTA: DHAMMAAN XUQUUQDA WAXAY LAHAYD
Abaalmarinta Abaalmarinta, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL: Ururka Samafalka Iskuduwaha Scottish SC044948